[Soo saaraha qaybaha baabuurta] Sidee loo doortaa nalalka hore?
Autoparts gawaadhida 'CHEVROLET'
HONDA ayaa dib u furaysa
HYUNDAI iskiis u fura
Otomaatigga gawaadhida 'MERCEDES-BENZ'
MITSUBISHI otomaatig ah
NISSAN gawaarida iswada siiya
Nalalka gawaarida waxaa loola jeedaa laambadaha gawaarida. Waa aalad loogu talagalay gawaarida inay iftiimiyaan wadada habeenkii, iyo sidoo kale qalab loogu talagalay kicinta calaamadaha gawaarida kala duwan. Nalalka gawaarida guud ahaan waxaa loo qaybiyaa nalka hore ee guriga, laydhadhka dambe, astaamaha leexashada, iwm. Noocee nambarka hore ah ee maanta inta badan la wadaago?
Nalalka Qaybaha Gawaarida - Kala-soocida Nalalka Hore
Nalka hore ee gaariga – Nalalka hore ee Halogen
Nalalka Halogen dhab ahaantii waa nooc gaar ah oo laambadaha iftiinka u ah. Mabda'a ayaa ah in markii ay durdur ku dhex socdaan caabbiyaha, uu dhalin doono kuleyl, iyo marka heerkulku sarreeyo, waxay soo saartaa shucaac jir madow leh oo leh mowjad ku jirta qeybta iftiinka muuqda. Guud ahaan waxaa jira laba nooc oo laambada halogen ah: iodine tungsten lamps iyo bromine tungsten lamps. Mabda'a waa isku mid. Marka laambad iftiin leh la shido, inkasta oo heerkulka dunku uusan ka badnayn barta dhalaalida iyo barta kuleylka ee tungsten, qadar yar oo tungsten ah ayaa weli isbadal ku samayn doona heerkulka sare. Marka atamka kacsan ee tungsten ay la kulmaan qolof guluub qaboojiye ah, way isku ururin doonaan oo soo degi doonaan, muddo kadibna filim madow oo tungsten ah ayaa ku ururaya qolofka guluubka. Tani waa sababta qolofka sare ee laambadaha caadiga ah ay u noqdaan madow muddo dheer kadib. Haddii aad ka buuxisid guluubka iodine xoogaa ah, markii guluubka la shido, iodine-ka wuxuu isu beddeli doonaa gaas. Marka uumiga iodine uu la kulmo qabow tungsten, way ka falcelin doontaa iyada oo sameysanaysa xarun leh karkaraya dhibic-tungsten iodide, taas oo ka dhigaysa qolofka guluubka Tungsten-ka la soo daadiyey ayaa isbeddelaya. Gaaska loo yaqaan 'Tungsten iodide' wuu kala daadan doonaa marka uu la kulmo heerkul sarreeya. Marka gaaska tungsten iodide uu la kulmo fiilada, wuu kala jajabiyaa, wuxuuna tungsten kaga tagayaa fiilada, halka iodine-ka uu kusii socdo inta udhaxeysa dunta iyo qolofka qaab gaaska ah. Markay u timaaddo qolofka guluubka markale, waxay la xiriiri doontaa qolofka mar kale. Falcelinta tungsten way Sidan oo kale, hal dhinac, fiiladu waxay ku sii wadaysaa inay u rogrogto tungsten qolofka guluubka, dhinaca kalena, iodine wuxuu ku sii wadaa inuu tungsten dib ugu celiyo feylka, sidaas darteed heerka is beddelidda iyo isticmaalka fiilada si weyn ayaa loo dhimay, oo nolosha guluubka waa la dheereeyey. Sidaa darteed, iodine tungsten laambadaha waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo laambadaha iftiinka leh oo leh awood sare. Nalalka Halogen ayaa si ballaaran loogu isticmaalay aagga nalalka baabuurta.
Nalka hore ee gaariga – Nalalka Xenon
Xenon lamp HID waa soo gaabinta Xaraaradda Cadaadiska Sare ee soosaarida gaaska, kaas oo lagu magacaabi karo laambad culus ama laambad xenon. Mabda 'ahaan waa in la buuxiyo tubbada muraayadda quartz-ka ee loo yaqaan' UV-cut-ka 'anti-ultraviolet crystal quartz galaas leh noocyo badan oo gaasas kiimiko ah, badankoodna waa gaasas aan firfircooneyn sida xenon (Xenon) iyo iodide, ka dibna baaska gaadhiga u dhaaf. 12-volt DC danab ayaa isla markiiba lagu cadaadiyey ilaa 23,000 volts, electron-ka xenon ee ku jira tuubada quartz-ka ayaa ku faraxsan inuu kala tago iyada oo loo marayo koronto-ballaadhkeedu sarreeyo, isha iftiinkuna waa laga dhex abuuraa labada koronto. Tani waa waxa loogu yeero dheecaanka gaaska. Iftiinka cad ee aadka u xoog badan ee soosaara gaaska xenon wuxuu kordhin karaa heerkulka midabka iftiinka, oo lamid ah falaaraha qorraxda ee maalinta, waqtiga hadda looga baahan yahay qaliinka HID waa 3.5A oo kaliya, dhalaalka waa seddex jibaar kan nalalka halogen-ka dhaqameed, nolosha adeeguna way ka dheertahay tan caadiga ah Nalalka halogen-ka ayaa 10 jeer ka dheer. Nalalka Xenon ayaa si ballaaran loogu isticmaalay aagga nalalka baabuurta.
Nalka hore ee baabuurka – Nalalka ceeryaanta
Waxaa lagu rakibay dhinaca hore ee gaariga waxyar ka hooseeya nalka hore ee baabuurka, waxaana loo isticmaali jiray in lagu iftiimiyo wadada marka la wado darawalka xilliga cimilada roobka iyo cowska leh. Sababtoo ah aragtida hoose ee ceeryaanta, aragtida wadaha ayaa xadidan. Iftiinka wuxuu kordhin karaa masaafada socodka, gaar ahaan laambada hurdiga ah ee ka hortaga ceeryaamo waxay leedahay dhexgal iftiin xoog leh, waxay wanaajin kartaa muuqaalka wadaha iyo kaqeybgalayaasha taraafikada ee ku hareeraysan, si gawaarida soo socota iyo kuwa lugeynaya ay iskaga dhex helaan masaafo dheer.
Haddii laambadda ceeryaantu si lama filaan ah u bakhtido, waxaad u baahan tahay inaad aragto haddii ay sabab u tahay xidhiidhka liita ee qaybta u dhiganta. Haddii korontada qaybteeda koontaroolku ay xumaato, biyaha iyo waxyaalaha kale ee isku xidhka dalwada, waxay ku sababi doonaan ifafaalaha kor ku xusan xaaladaha waddooyinka kacsan.
Nalka hore ee gaariga – Nalalka LED-ka
Diode Emitting Diode, oo loo soo gaabiyo LED, magaca Shiinaha ayaa ah diode iftiin-dhalinaya. Iftiinka iftiinka LED-ka waxaa loola jeedaa isku imaatinka LED-yada FPC-ga loo yaqaan 'strip circuit-shaped board' ama guddiga adag ee PCB, kaas oo loogu magac daray ka dib qaabkiisa sheygu waa sida xariijinta.
Nalka hore ee baabuurka – Nalalka socda ee maalinlaha ah
Nalalka socda ee maalintii waa in si toos ah loo daaraa marka mashiinka gaariga la bilaabo. Habeenkii ka dib, darawalku wuxuu u baahan yahay inuu gacantiisa ku shido laydhadhka caadiga ah, nalalka shaqeeya ee maalintii ayaa si otomaatig ah u damiya Nalalka socda ee maalinlaha ah waxay u sahlayaan dadka kale ee “wadada isticmaala” inay arkaan gaariga, waxayna cunaan tamar ka yar nalka hore ee iftiinka hoose. Nalalka socda ee maalintii waxaa kaliya lagu qalabeeyaa dhowr gaari oo wanaagsan waxayna astaan ​​u yihiin baabuurta wanaagsan.
Baabuurka uu hogaaminayo laydhadhka maalintii shaqeeya ee lagu rakibay afaafka hore ee gaadhiga jidhkiisu waa laambado ka dhigaya gaadhiga mid si fudud loo garan karo markuu wado maalintii. Shaqadeedu maaha inay u oggolaato darawalku inuu si cad u arko wadada, laakiin waa inuu dadka kale ogeysiiyo inuu gaari imanayo. Sidaa darteed, laambad noocan ahi ma aha laambad iftiin leh, laakiin waa laambad nal ah. Dabcan, ku darsiga nalalka maalinlaha ah ee baabuurta ayaa gaariga ka dhigi kara mid qabow oo aad u dhalaalaya, laakiin saameynta ugu weyn ee laydhadhka socda ee maalinlaha ahi kuma jiraan bilicsanaanta, laakiin waa bixinta baabuur la garan karo. Daarida laydhka hore ee baabuurka intaad dibada ku kaxaynaysid waxay yareyn kartaa shilalka gawaarida 12.4%, isla mar ahaantaana hoos u dhigtaa suurtagalnimada dhimashada shilalka baabuurta 26.4%. Marka la soo koobo, ujeeddada laydhadhka maalinlaha shaqeeya waa nabadgelyada taraafikada.
Cinwaanka: Dhismaha Ganacsiga Caalamiga ah, 50 Wadada Zhonghua, Nanjing, PRChina
Right Copyright - 2019-2020: Dhamaan Reserved Rights. Beddelida alaabada soosaarayaasha qalabka asalka ah.